SuperTuxKart 1.0 ikozvino yave kuwanikwa nemateki matsva uye online mode | Linux Vakapindwa muropa
Nhau dzakanaka kana iwe uchida kutamba mitambo yemotokari neshamwari dzako: SuperTuxKart 1.0 yakaburitswa zviri pamutemo. Uku ndiko kusunungurwa kwakakosha kwemusoro wenyaya, nekuti ndiyo yekutanga yakagadzika vhezheni yemukurumbira yakavhurwa sosi mutambo kuti upe mukana wekutamba muInternet multiplayer mode. Zvinoita pasina kutaura kuti izvi zvichatibvumidza kutamba neshamwari sekunge yaive PlayStation kana Xbox, kuchengetedza madaro.
Sezvaunoziva, Tux ndiyo Linux mascot. SuperTuxKart 1.0 iri iyo vhezheni yeSuper Mario Kart yeLinux anoshanda masystem, kana kuti zvirinani zvakagadzirwa nharaunda yeLinux, iyo inouya nenhau zhinji dzinonakidza, pakati payo nzira yemhepo inomira. Uye ndezvekuti chero munhu akatamba neshamwari nenzira iyi kune chero zita remusoro achaziva kukosha kwekugona kutamba nevamwe vanhu panguva imwechete uye yakazara skrini.
SuperTuxKart 1.0 inosanganisira yakagadziridzwa mota
Vagadziri vayo vanoti ndizvo chiitiko chakakosha kwazvo munhoroondo yese yemutambo, uyo ava nemakore gumi nemaviri ekuberekwa. Izvo zvitsva zvinowanikwa mune iyi vhezheni ndeizvi:
On-line modhi, yatinogona kutamba nayo kusvika kushamwari pfumbamwe (gumi vachiverenga isu). Iyo sisitimu yekubatanidza yakafanana neyemimwe PC mitambo: isu tinosarudza sevha uye totanga kutamba. Seva inogona kunge iri yeruzhinji kana yakavanzika.
Makwara matsva. Iyo yekutanga nzira yemba yakagadziridzwa uye yava kunzi Revenbridge Mansion. Iyo Dondo Sango, nzira yaimbobhadharwa kare, yakaverengerwawo.
Mhando dzakasiyana dzemitambo: yakajairwa nhangemutange, nguva mujaho, nhabvu, kurwa uye kutora mureza.
Gameplay uye kugadzirisa mashandiro.
Kuti utambe pamhepo unozoda kubatana kwakanaka, kunyanya kana tikashandisa yakavanzika server; ichave iyo inomiririra mushandisi iyo inofanirwa kuve nehukama hwakanaka. Chero zvazvingaitika, vanoti iwe unoda "shoma" bandwidth kuti ugone kutamba kuSuperTuxKart 1.0 mune yayo yakawanda nzira. Idzi zvakare inyaya dzakanaka kubva, zvikasadaro, mushandisi ane yakanakisa kubatana anowanzove nebhenefiti (ngavataure ivo vanondikwikwidza mu Call of Duty vandakapfura kwavakange vasisiri nekuda kwekubatana kwangu kwakaipa).
Kunyangwe mutambo uine izwi rekuti "Tux" mumusoro waro, iriwo inowanikwa yeWindows uye macOS. Pakati peavo vanofanirwa kunge vatove nedudziro ndeye Android neLinux. Vashandisi veUbuntu vanayo mumahofisi epamutemo, asi haisati yagadziridzwa chero mune yayo APT vhezheni kana mune yayo Snap vhezheni. Iyo Flatpak vhezheni zvakare haina kusvika parizvino. Avo vanoda kuiridza vachatofanira kurodha pasi mabhainari acho uye unomhanya nayo nemaoko. Inotangwa nekuita iyo faira run_game.sh, iyo ichaitwa nekudzvanya kaviri pairi mushure mekuipa mvumo yekumhanya sechirongwa (izvi zvinoenderana nesisitimu yekushandisa). Iyo Android vhezheni, yatovandudzwa, inowanikwa pano.
Wakambozviedza here? Ko izvi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » SuperTuxKart 1.0 ikozvino yave kuwanikwa nemateki matsva uye online mode